Backgammon🥇 Ngena kwaye wonwabe kwi-Emulator. Online
I-backgammon: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo? 💡
Ukudlala i-backgammon kwi-intanethi simahla, nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
1 nyathelo . Vula isikhangeli sakho osithandayo kwaye uye kwiwebhusayithi yomdlalo Isiphelo sendlela.
2 nyathelo . Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Cofa nje ku "Ukudlala" kwaye ungaqala ukudlala, khetha ukudlala ngokuchasene nomatshini okanye dlala nomhlobo.
Inyathelo le-3. Nanga amanye amaqhosha aluncedo. Ngaba "Yongeza okanye susa isandi", Cinezela iqhosha"dlala"kwaye uqale ukudlala, unga"Nqumama"kwaye"Qalisa kwakhonaNanini na.
Inyathelo le-4. Susa onke amaqhekeza ebhodini phambi komchasi wakho.
Inyathelo le-5. Emva kokugqiba umdlalo, cofa "Phinda Uqalele" ukuqala ngokutsha.
Intsingiselo ye-Backgammon 🙂
Igama Backgammon Ligama elinikwe imidlalo eliqukethe Ibhodi yeethayile zeemilo ezahlukeneyo kunye nemibala, ekufuneka ibekhona ihlelwe indawo ethe tyaba, ngesiqhelo ibhodi, yiyo loo nto igama layo.
Ngokwemigaqo, eyahlukileyo kumdlalo ngamnye, umntu omnye okanye abaninzi banokuthatha inxaxheba. Ngelixa eminye imidlalo ifuna abathathi-nxaxheba ukuba basebenzise ubuchule bokuqiqa okanye ubuchule, ulungelelwaniso, ubuchule bobuchwephesha, inkumbulo, amandla okutsala, okanye ezinye izakhono, eminye imidlalo lithuba nje elimsulwa, ukuphumelela okanye ukuphulukana.
Ngokwemvelo, imidlalo ngokubanzi ayibandakanyi isenzo somzimba, Nangona ezinye zibandakanya itafile kwaye zenza imisebenzi ngaphandle kwayo. Imidlalo yeBhodi ihlala ihlelwe ngokwamaqela ahlukeneyo ngokweempawu zayo ezizodwa.
Le yimizekelo yazo.
Abo Sebenzisa idayisi: Yimidlalo leyo basebenzisa idayisi okanye iziqwenga ezilingana nazo, ezinje nge ITauli, iLudo, iipaki, iBackgammon, Iinyoka kunye neleli phakathi kwabanye.
Abo basebenzisa amathokheni: Ziyasetyenziswa imidlalo esebenzisa amathokheni njengeyona nto iphambili. Imizekelo yolu hlobo lomdlalo yile njenge yenze okanye mahjong.
Imidlalo yebhodi yemveli: Le yimidlalo edlalwa ebhodini, njengemidlalo yosapho ye chess (I-chess yaseNtshona, i-Xiangqi okanye i-Shogi "i-Chinese chess" okanye "i-chess yase-Japan", i-Janggi okanye "i-chess yase-Korea" okanye i-Makruk, ekwabizwa ngokuba yi "Thai chess"), damask, I-chess yamaTshayina, i-Hnefatafl (imidlalo yebhodi yosapho yaseJamani), iMancala (imidlalo yebhodi yosapho kunye neSurrta.
Imidlalo yebhodi yangoku: Nangona ingacacisi ngokucacileyo phakathi kwezinto ezibizwa ngokuba "yimidlalo yebhodi", le midlalo ikwabizwa njalo kuba kuninzi lweziganeko isebenzisa inqaku kuphuhliso lwemidlalo yayo. Ngapha koko, ilizwe laseBrazil lichaza imidlalo yemfazwe edumileyo igama elithi "imidlalo yemfazwe" yinguqulelo yokoqobo.
Imidlalo yabadlali abaninzi: Banokuqhotyoshelwa kwezinye iimeko ngaphezulu kwesithathu sabadlali, kodwa badlala kabini rhoqo. Phakathi kwabo kukho i-jimidlalo yamakhadi emveli, nokuba kumgangatho waseFrance okanye waseSpain; okanye imidlalo yamakhadi efana neHanafuda, eyinto eqhelekileyo eJapan.
Umahluko wanamhlanje kunye nentengiso yemidlalo yamakhadi, zezi Imidlalo yamakhadi eqokelelweyo efana noMlingo: Ukuqokelela okanye iYu-Gi-Oh!.
Zenziwe phakathi kwiminyaka yoo-1970. Yimidlalo apho indima ye omnye umntu uhlala ebeka abadlali kwiimeko ezithile ezibavumela ukuba baphumelele iimvavanyo ukufezekisa injongo ethile zitolikwa.
Enyanisweni, Uphawu lweBackgammon ngumdlalo wokudlala hayi ukusetyenziswa kwetafile. Imingxunya kunye neDragons luhlobo lwe-backgammon olubizwa ngokuba yi-fantasy yamaqhawe, kodwa kungekudala iya kufika kwintengiso, iphefumlelwe kukuvela kwezinye i-backgammons ezizezinye iintlobo ezininzi ezinje ngeentshona, isini sebhokhwe, intsomi yesayensi, i-opera yendawo, uloyiko lwe-gothic, uburharha, ubuntlola, ubuhashe, njl.
Imbali ye-Backgammon 🤓
Igama I-backgammon ivela kwigam gamen (ukusuka kumaNgesi aphakathi), oko kuthetha umdlalo.
Imidlalo yosapho lakwaBackgammon yayi omnye wemidlalo yokuqala ukuvela. Uninzi lwazo lubandakanya ukuqengqa idayisi okanye enye into elingana neqokobhe, imbewu, okanye iinyosi.
Olu sapho lubandakanya imidlalo emininzi edumileyo, kubandakanya iSenet (ikopi yomdlalo yafunyanwa engcwabeni likaTutancamon), iNyout (umdlalo waseKorea), uPatolli (mhlawumbi umdlalo owuthandayo wama-Aztec), iPachisi (umdlalo wesizwe waseIndiya, nangaphezulu ezahlukeneyo) eLudo naseChispa) kunye noMdlalo weGoose (umdlalo waseYurophu owaduma ngenkulungwane ye-XNUMX).
Kunokuthiwa i-Backgammon iziphumo zotshintsho oluninzi kunye nokuvela, kunye neminye imidlalo yamandulo esele isekhona unanamhla. Imvelaphi yayo inokunxulunyaniswa nenkcubeko yakudala yaseSumerian nase-Egypt. Iiphaneli ezingafaniyo nezala maxesha zafunyanwa kumangcwaba akwiNtlambo yomNayile eYiphutha, nakwiindawo ezingqonge iUre eMesopotamiya.
Ngaphambi kwama-800, umdlalo obizwa ngokuba nguNard wabonakala ePersia. Ngokuqinisekileyo amaArabhu ayesele ewazi umdlalo, kunye neminye imidlalo, xa boyisa iPersi ngenkulungwane ye-XNUMX. AmaPersi, nayo, ayifundile le midlalo kumaHindu, ekusenokwenzeka ukuba wayeyazi ngamaTshayina. Kodwa yayizi-Arabhu eziphakamise le midlalo kwinqanaba lokubaluleka kwazo kangangokuba babhala iincwadi zokuqala ngazo. INard kunye nokuhluka kwayo kufumaneka kwiindawo ezininzi eAsia.
Kubonakala ngathi umdlalo weNard waziswa eYurophu ngama-Arabhu, kwaye kumxube nomdlalo weTabula kukhokelele kuhlobo olutsha. Iziqwenga ezingama-30 zisetyenzisiwe kwibhodi enamanqaku angama-24, intshukumo ichazwa yidayisi ezi-2.
Ngexesha elifutshane umdlalo omtsha waduma, ukhuphisana nechess kwindawo yokuqala phakathi kwezidwangube, indawo eyathi kamva yahlala yimidlalo yamakhadi.
Ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe yavela umahluko omtsha othi, kunye nokuphuculwa kwecandelo, kukhokelele ekuvuseleleni umdlalo kunye nokusasazeka kwawo kuyo yonke iYurophu. Waziwa eNgilani njenge Ngasemva, eScotland njengoGammon, eFrance njengoTrictrac, eJamani njengoPuff, eSpain njengeTablas Reales nase-Itali njengeTavole Reale.
Ngexesha nje phambi kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kwabakho umkhuhlane wokungcakaza. Esinye sezizathu yayikukuyilwa kwezinto okwenziwe ngumntu waseMelika ngo-1925 ukubakho kokuphindaphinda ixabiso lamanqaku adlalwayo. Kodwa kwakhona, umdlalo uye wehla.
Kwiminyaka yoo-1970, ngokungalindelekanga, waphinda wathandwa, Ukuza kuthi ga ngoku kulula ukufumana ukuthenga zombini izinto kunye neencwadana. KuMbindi Mpuma, iTrictrac igcine ukuthandwa kwayo kwaye idlalwe ngokubanzi eLebhanon nakwamanye amazwe angabamelwane.
Izinto zokudlala iBackgammon💡
Ukudlala i-Backgammon, udinga abathathi-nxaxheba aba-2, ibhodi ye-backgammon, iithayile ezimnyama ezili-15, iithayile ezimhlophe eziyi-15 kunye needayisi ezinamacala amathandathu, kunye nezindlu ezingama-6 ezingunxantathu eziqokelelwe ukusuka kwi-24 kuye kwi-6 zahlulahlulwe zangamacandelo ama-6.
Abadlali - 2
Izinto okanye amatye - 15 amnyama, 15 amhlophe
Ibhodi - izindlu ezinemibala engama-24 ezidityanisiweyo eziqokelelwe ukusuka kwi-6 kuye kwi-6 zahlulahlulwa zangamacandelo ama-4
Injongo: Susa zonke iithayile ebhodini phambi komchasi.
Imigaqo yomdlalo we-Backgammon
Nantsi i isishwankathelo esikhawulezayo yemigaqo ye-Backgammon:
Misela umdlali wokuqala ngokuqengqa idayisi
Hambisa iinxalenye isekwe kumaxabiso athathwe kwidatha
Ukulingana kwedatha kuvumela ukuhamba kabini
Akuvumelekile ukuhambisa iziqwenga zakho uye ezindlwini ezinamaqhekeza angaphezu kwamabini aphikisanayo
Ukuba indlu ekujoliswe kuyo inesiqwenga esinye kuphela, inokubanjwa
Qalisa ku susa iziqwenga zakho ebhodini xa bonke bekwi-quadrant yokugqibela
Umdlalo we-backgammon ngumdlalo webhodi yemveli, apho ophumeleleyo ngulo okwaziyo ukususa onke amaqhekeza akhe ebhodini kuqala.
Kodwa ukuba ufuna ukufunda imigaqo epheleleyo, Sishiya apha ngezantsi.
Inkcazo yomdlali wokuqala
Ngaphambi kokuqala intshukumo yamaqhekeza kuyimfuneko Chaza ukuba ngubani oza kudlala.
Ukuchaza ukuba ngubani oqala umdlalo we-backgammon, Umdlali ngamnye kufuneka aqengqele 1 afe. Nabani na ofumana elona xabiso liphezulu uya kuba ngowokuqala ukudlala. Kwimeko yetayi, idayisi ziyakhululwa kwakhona de kube umdlali wokuqala uchaziwe. Okokugqibela kufuneka bathathe inyathelo lokuqala, basebenzise ixabiso ledayisi abaza kudlala kuqala.
Umzekelo: Umdlali A uqengqa idiski kwaye ufumane ixabiso 5; umdlali B uqengqa idiski kwaye ufumana ixabiso 5 ngokunjalo; Umdlali A uqengqa iday kwakhona kwaye ngoku ufumana ixabiso 4; umdlali B uqengqa idiski kwaye afumane ixabiso 6; Umdlali B uya kuba ngowokuqala ukudlala ngamaxabiso edayisi yesi-4 neyesi-6 (amaxabiso edayisi yokugqibela edlalwe ngabadlali uA noB).
Ukuhambisa iinxalenye 🧩
Emva kwenqanaba lokuchaza ukuba ngubani oqala umdlalo we-backgammon, umdlali ngamnye, naye, kufuneka qengqa iidayisi ezi-2 kwaye uhambisa iziqwenga zakho ngokwexabiso ledatha.
Wonke umdlali uhlala susa iziqwenga kwicala elinye, enye ngokwewotshi enye ijike ngewotshi.
Ukuba umdlali wangoku akakwazi ukwenza intshukumo efanelekileyo kunye namaxabiso afunyenwe kwidayisi, lo mva uya kudlula ekujikeni.
Indlu ekujoliswe kuyo yesiqwenga ayinakuba yenye esele inamaqhekeza amabini okanye nangaphezulu. Ukuba indlu ekujoliswe kuyo inesiqwenga esinye kuphela esichasayo, iyafakwa, ishiye ibhodi iye kwi "bar".
Xa umdlali enesicatshulwa esinye okanye ezingaphezulu, unokwenza uhlangulo kuphelaOko kukuthi, kushenxiswa okususa iziqwenga zakho ezibekiweyo kwaye uzibeke endlwini, uhlala uthobela umthetho wokuba indlu ekujoliswe kuyo ayinakuba ngaphezulu kwesiqwenga esinye esichasayo.
Ukuba umdlali uqengqa amaxabiso afanayo kwidayisi yakhe ezi-2, unelungelo lokwenza ezi-4 zihambe ngamaxabiso edayisi endaweni yesiqhelo esi-2.
Ukususa iziqwenga ebhodini
Umdlali unokuqala kuphela ukususa iziqwenga zakhe kwibhodi ye-Backgammon xa zonke zikwinqanaba elisezantsi (elibizwa ngokuba licandelo langaphakathi). Ukususa isiqwenga, umdlali kufuneka aqengqe inani elilinganayo nenani lezikwere ezisele kwidayisi. Ukuba ufumana ixabiso eliphezulu kunokuba ufuna iziqwenga ezikude, kuya kufuneka uzisuse ezo ziqwenga. Umzekelo.
Ophumeleleyo kulo mdlalo ngumdlali osusa zonke iziqwenga zakhe ebhodini phambi komchasi.
Iingcebiso ngokudlala i-Backgammon🤓
Kuphephe ukushiya isiqwenga esinye kuphela ezindlwini
Ukuba ufuna ukushiya isiqwenga sodwa, zama ukugcina sikude kwisiqwenga somchasi
Gcina indlu yokugqibela yomchasi ivaliwe
Ukuhlala izindlu ezininzi kangangoko kunokwenzeka